Shirkadah boostada oo baaritaan lagu sameynayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkadah boostada oo baaritaan lagu sameynayo
La daabacay tisdag 24 maj 2016 kl 14.00
"Baaritaan ayaa ku sameyneynaa shriakdaha boosatda"
sawir: Hasse Holmberg / TT
Sannadyadan dembe waxaa kordhay cabasho dadweynaha ka muujinayaan shirkadaha boostada, maadaame ay badatay waraaqaha la waayo.
Sidaas daraadeed ayaa baaritaan gaar ah lagu sameyn doonaa shirkadaha ugu waaweyn bostada ee kalo ah PostNord iyo Bring Citymail.
Sannadkii hore ayey hey’adda bostada iyo isgaarsiinta PTS u jeedisay shirkadahan in wanaajiyaan wax qabadkooda, laakiin weli wax natiijo ah lamo hayo, sida uu yeri Sten Selander oo ah sarkaal ka howl-gala hey’ada bostada iyo isgaarsiinta PTS.
- Sidas draaded waxaan, go’aansanay in aan sameyno daraasad madax banaan oo aan ku eegeyno halka qaladka ka jiro iyo qiimeynta tillaabooyinka loo baahanyahay in la qaado, ayuu yeri Sten Selander oo ka howl-gala PTS.
Hey’adda bostada iyo isgaarsiinta ayaa warbaxinteeda ugu dembeysay ku sheegtay in cabashada dadweyna ka qabaan shrikadaha waaweyn ee bostada ay aad u korartay sannadkii hore marka loo barbardhigo kii ka sii horeeyey.
- Waxaa qof u qeybiyaan waraaqaha deriska, waraaqaha qof sugayana waa la waayaa, ayuu yeri Sten Selander.
PostNord oo horey loo oran jiray Posten ahna shirkad ay dowladda leedahay oo heysatana boqolkii 80 suuqa bostada ayaa sannadkii hore waxaa laga soo jeediyey cabashooyin gaaraya 68 000 oo la xiriira waraaqaha iyo baaked qeybinta, taas oo ah kor u kac dhan boqolkii 50.
Erika Ahlkvist, madaxa qeybinta ee shirkadda Postnord ayaa ku sharaxday boostada qaldanta in ay la xiriirto dhibaato farsamo oo ka jirta makiinadaha kala saara waraaqaha oo dhawahanaha la howl-geliyey si loogu babac dhigo cadadka batay ee waraaqaha.
- Waan saxnay hadda barnaamijyada kalo sooca warqaaha si aan u yareeyno kalo sooca qaldama. Aad ayaan u soo dhaweyneyna hubinta tayada ee hey’adda boostada iyo isgaarsiinta, waxaana arganaa fursado aanw ax kaga baran karno halka wax naga qaldameen si aan u hagaajino wax qabadkeena wax hadda ka dembeeya, ayey tiri Erika Ahlkvist oo ka howl-gasha PostNord.
Sidoo kale shirkadda kale ee boostada Bring Citymail ayaa soo dhaweysay baaritaanka gaarka ah ee hye’adda PTS. Hey’adda ayaa la filayaa in ay mustaqbalka tillaabo ka qaado shirkadaha boostada ee aan hagaajin waxqabadkooda.